Bụ n'ebe ọ bụla nchekwa na 3D biri ebi electric ụgbọ ala? Ị na-ama na-emeghe ya? - China Cixi Lanbo Obibi
Bụ n'ebe ọ bụla nchekwa na 3D biri ebi electric ụgbọ ala? Ị na-ama na-emeghe ya?
3D-ebi akwụkwọ technology dabeere a digital nlereanya, iji a bondable ihe onwunwe dị ka powdered metal ma ọ bụ plastic na-ebipụta na Ọdịdị nke ihe oyi akwa site na oyi akwa. Nke a technology nwere ngwa ke ubi nke ọla, akpụkpọ ụkwụ, ulo oru imewe, ewu, engineering na-ewu ụlọ, akpakanamde, aerospace, na dentistry.
Na November 2010, ụwa mbụ ụgbọ ala urbee e biri ebi na a 3D ngwa nbipute wee si. Na nso nso, Italian electric ụgbọala emeputa XEV mara ọkwa na ọ ga-na-arụkọ ọrụ na China na 3D ngwa nbipute ihe ụlọ ọrụ polymake na-emepụta 3D biri ebi electric ụgbọala LSEV, nke ga-ụwa mbụ uka-emepụta 3D biri ebi electric ụgbọ ala. The n'ichepụta okirikiri nke a ụgbọ ala bụ banyere Na ụbọchị 3, ụgbọ ala nwere a top ọsọ nke 43 mph, a otu ụgwọ 93 kilomita, na a zuru ụgbọ ala ji naanị 450 n'arọ.
N'ezie, Japan si Honda na nso nso wuru otu oche-electric ụgbọ ala, ahụ na-fọrọ nke nta ka esịnede 3D biri ebi ogwe, na ugbu a bụ-eji izipu biscuits, ma Honda kwuru na ihe nlereanya kwesịrị ekwesị ka uka mmepụta. Ọ bụ ezie na e nweghị kpọmkwem nhazi data maka 3D biri ebi electric ugbo ala, karịsịa nche data, dị ka a bara uru technology, ọ pụrụ ọbụna ịbụ a technology ka subvert ụlọ ọrụ. Anyị kwesịrị inwe ihe na-emeghe uche na-anabata ya. Site ugbu a 3D biri ebi electric ugbo ala, ha na-lekwasị ke miniaturization na ala na-agba ubi. M kwere na a ga-mkpa data na 3D biri ebi electric ugbo ala na-esonụ 1-2 afọ, dị ka nchekwa na operability nke ugbo ala. , Nkasi obi na ndị ọzọ. The 3D ibi akwụkwọ electric ụgbọ ala ka na-amalite amalite, na a ga-enwe ụkpụrụ na akụkọ na nchekwa ule na-agba ịnyịnya na ahụmahụ ndị na-esonụ ugbo ala, n'ihi na ugbo ala obi site na-eji ọkụ ga nwere a ahịa, ya mere, n'ikpeazụ, 3D e biri ebi electric ụgbọala ga-abịa. The ọzọ tozuru etozu. N'ezie, na-ede akwụkwọ na-adịghị cheta na-emeghe 3D biri ebi electric ụgbọala, ma ọ bụrụ na a 3D ibi akwụkwọ electric ụgbọ ala-akwụ ụgwọ ala, nchekwa na-ekwe nkwa, na ike izute ha n'ụgbọala kwesịrị mere na-agbalị ya!